नाम्चेमा भरियाका लागि छुट्टै होटल – Tesro Ankha
त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई सधैँ रिस उठ्थ्यो । ‘यो ठाउँका मानिससँग मानवीय संवेदना छैन,’ उनीहरू यस्तै सोच्थे । उनीहरूको आरोप थियो, ‘यो ठाउँ हाम्रा लागि वैरी हो ।’
परिस्थिति बदलिएको छ । परिस्थिति बदलिएपछि उल्लिखित आरोप–प्रत्यारोप सुन्न परोइन अचेल । यहाँका मानिससँग मानवीय संवेदना छैन भन्न पनि छाडिसके उनीहरूले । अनि उनीहरूले भन्न छाडे– यो ठाउँ हाम्रा लागि वैरी हो भनेर ।
अचम्म † हिजोसम्म त्यही ठाउँसँग रिसाएका उनीहरूमा आज कसरी एकाएक यो परिवर्तन आयो ? परिवर्तनका सूत्राधार को होलान् ? सूत्राधारको कुन जादुमन्तरले त्यस्तो काम गर्यो, जसले गर्दा उनीहरूको मुखमा बुझो लगायो ।
सगरमाथा आरोहणमा जानेहरूले नाम्चे बजार नटेकी सुखै छैन । सगरमाथा प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित नाम्चे बजारमा पर्यटक भरियाका लागि सधैँ हेलाँहोचो गरिन्थ्यो, गरिन्छ । त्यस्तो व्यवहार गरेपछि उनीहरू नाम्चे बजारलाई मुटु नभएको ठाउँ भनेर आरोप लगाउँथे । जुन आरोप उनीहरूले लगाउन छाडिसके ।
पर्यटक भरियाका लागि भनेरै नाम्चे बजारमा क्यान्टिन खोलिएको छ । नाम्चे युवा समूहले भरिया क्यान्टिन सञ्चालनमा ल्याएपछि पर्यटक भरियाको रिस मत्थर भएको हो । नाम्चेले आफूहरूलाई हेलाहोचो गरेकोमा कुनै फिक्री छैन । भरिया क्यान्टिन सञ्चालनमा आएपछि उनीहरू खुसी देखिन्छन् ।
पर्यटकको भारी बोकेर नाम्चे पुग्दा सधैँ तनावमा देखिन्थे उनीहरू । नाम्चेको जुनै होटलमा खाना खाए पनि खाना खाएको होटलमै बास बस्न दिइन्नथ्यो पर्यटक भरियालाई । त्यसैले नाम्चेबजारसँग उनीहरूको हित्तचित्त नमिलेको हो । नाम्चेबजारसँग हित्तचित्त नमिले पनि पछिल्लो समयमा भरिया क्यान्टिनसँग उनीहरूको सुमधुर सम्बन्ध जोडिएको छ । पर्यटकको भारी बोकेर नाम्चे आइपुगेका श्याम तामाङ भन्छन्, ‘नाम्चे कहिल्यै हामीजस्ताका ठाउँ नलागे पनि त्यही ठाउँमा मन, मुटु भएका मानिस पनि हुँदारहेछन् । जसले हाम्रो समस्या सम्बोधन गर्दै हाम्रै समूहका लागि भनेर क्यान्टिन खुलाइएको छ ।’
नाम भरिया क्यान्टिन भने पनि यहाँ खान, बस्नका लागि राम्रो प्रबन्ध मिलाइएको छ । नाम्चेले सधैँ उपेक्षा गरेको समूहलाई लक्षित गरेर भरिया क्यान्टिन सञ्चालनमा आएपछि क्यान्टिन सञ्चालक मदनकुमार थुलुङ भरियाका पक्षपाती ठहरिएका छन् । क्यान्टिन सञ्चालक थुलुङ भन्छन्, ‘क्यान्टिन भरियाकै लागि भनेर खोलिएको हो । तसर्थ, यहाँ खान, बस्नका लागि पहिलो प्राथमिकतामा भरिया नै पर्छन् । त्यसपछि मात्रै अरू ।’
नाम्चे युवा समूहले भरिया क्यान्टिन सञ्चालनमा ल्याएपछि होटलमा प्रतिछाक दुई सय रुपियाँमा खाना खाँदै आएका भरियाले क्यान्टिनमा सय रुपियाँमा पेटले मागेजति खाना खान पाएका छन् । नाम्चेमा सञ्चालित होटलमा भन्दा कम मूल्यमा खाना, खाजा खान पाउनु भरिया क्यान्टिनको विशेषता हो । खाना खाएपछि बास बस्नका लागि छुट्टै रुपियाँ बुझाउनु पर्दैन ।
एकैपटक एक सय ४० जना सुत्न सकिने सो क्यान्टिनमा बास बस्नका लागि रुपियाँ बुझाउनु पर्दैन । बाहिर खाना खाएर आएर आएका भरियाले क्यान्टिनमा सुत्नमात्रै पनि पाउँछन् । भरिया क्यान्टिन सञ्चालनमा आउनुअघि पर्यटक भरिया नाम्चेमा ओडार र रूखको फेदमा ओत लागेर रात कटाउँथे ।
२०७३ माघ २४ ०९:०९